विश्वभर कोरोना खोप बनाउने होड : कहाँ के कति प्रगति हुँदैछ ? - Jyotinews
विश्वभर कोरोना खोप बनाउने होड : कहाँ के कति प्रगति हुँदैछ ?
ज्योतिन्यूज २०७७ भदौ २५ गते ९:०४
काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरस खोप तयार पार्न विश्वव्यापी १७० भन्दा बढी ठाउँमा प्रयास भइरहेको छ।
यद्यपि यी खोपहरू प्रायः पूर्वक्लिनिकल परिक्षणको चरणमा छन् । विश्वले ध्यान तेस्रो चरणका परीक्षणहरू चलिरहेका ठाँउमा पुगेको छ।
हाल, विश्वभर फैलिएको घातक रोग कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न र यसलाई हराउनको विश्व लागि परेको छ । तर धेरै औषधी विकासकर्ताहरूले खोप सुरक्षित नभएसम्म सरकारको स्वीकृति नलिने निर्णय गरेका छन्।
विश्वका धेरै देशहरूमा भ्याक्सिन बनाउन राजनीतिक दबाब रहेकोले यो कदमलाई ठूलो झट्का लागेको छ। संयुक्त राष्ट्र महासभाका अध्यक्षले कोरोना भाइरस खोप विश्वका सबै देशहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका छन् ।
यहाँ हामी तपाइहरुलाइ हाल कोरोना खोपको बारेमा कहाँ कसरी अनुसन्धान भइरहेको छ र यो कुन तहमा छ भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौ ।
रसियाको खोप ’स्पुतनिक भि’
रसियाले यस खोपको दौड निरन्तर जारी राखेको छ। खोपको प्रारम्भिक नतीजा उत्साहजनक देखिएको छ । रसियाको खोप स्पुतनिक भि साना साना समुहहरुमा परीक्षणहरु गरिएको छ।
यी परीक्षणहरूमा, १८ देखी ६० बर्ष उमेर समुहका ३८ जनामा परिक्षण गरिएको थियो। पहिलो खोपको २१ दिन पछि दोस्रो खोप दिइयो र ४२ दिन सम्म निगरानीमा राखियो । सबै उम्मेदवारहरूले तीन हप्तामा कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न एन्टिबडीहरू विकास गरे।
भारतमा कोरोना खोप
भारतमा हाल तीनवटा कोरोना खोपहरू परिक्षणमा छन् । सरकारी स्रोतका अनुसार देशका दुईवटा खोप परीक्षणको दोस्रो चरणमा छन् भने एउटा खोप यसको तेस्रो र अन्तिम चरणमा छ।
भारत बायोटेकआईसीएमआर द्वारा विकसित गरिएको खोप कोभाक्सिन परिक्षणको दोस्रो चरणमा छ। जसलाइ देशको पहिलो स्वदेशी खोप भनिन्छ ।
त्यसैगरी देशको दोस्रो स्वदेशी खोप मानिने जाइकोव डि नामक खोपको दोस्रो चरण चलिरहेको छ । भारतको सीरम संस्थान र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय खोप तेस्रो र अन्तिम चरणमा परीक्षणमा छ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय खोप- अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको खोप परियोजनामा स्वीडेनको फार्मा कम्पनी अस्ट्राजेनेका पनि सामेल छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको कोविड खोपको परीक्षण विश्वका विभिन्न देशहरूमा भइरहेको छ।
यस खोप प्रोजेक्टको पहिलो र दोस्रो चरणहरूको परीक्षण अप्रिलमा इग्ल्याण्डमा एकै साथ पूरा भयो। तर एक जनामा परिक्षणले बिरामी बनाएपछि हाललाइ यसको परिक्षण रोकिएको छ ।
अमेरिकाको मोडर्ना कोरोना भ्याक्सिन
अमेरिकाको मोडर्ना नाम दिइएको खोपको क्लिनिकल परीक्षणमा अमेरिकी स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थान पनि सामिल छ। एनआईएच निर्देशक फ्रान्सिस कोलिन्स भन्छन् कि २०२० को अन्त सम्म कोरोना खोप लगाउने लक्ष्य छ।
नेशनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ र मोडर्ना इंकमा डा. फौचिका सहयोगीहरूले यस खोपको विकासको काम गरिरहेका छन्। यस खोपको सब भन्दा महत्वपूर्ण चरण २७ जुलाईदेखि सुरू भएको हो।
यसको परीक्षण तीस हजार व्यक्तिमा भइरहेको छ र त्यसपछि मात्र यो खोपले मानव शरीरलाई वास्तवमा कोभिड १९ बाट बचाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर थाहा पाउनेछ।
चीन कोरोना भ्याक्सिन कोरोनाभ्याक
चीनको निजी फार्मा कम्पनी सिनोवाक बायोटेकले काम गरिरहेका कोविड भ्याक्सिन परियोजना परीक्षणको तेस्रो र अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो मोडर्ना र अक्सफोर्ड पछि परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुग्ने तेस्रो खोप हो। यो खोप ब्राजिलमा नौ हजार स्वयंसेवकहरूमा परीक्षण भइरहेको छ।
अमेरिका र जर्मनीको साझा खोप बीएनटी १६२ बी
अमेरिकी फार्मा कम्पनी ’फाइजर’ र जर्मन कम्पनी ’बायोनटेक’ ले कोभिड खोप परियोजना बीएनटी १६२ बी २ मा सँगै काम गरिरहेका छन्। यी दुई कम्पनीहरूले एउटा संयुक्त बयान जारी गरेका छन् कि खोपको मानिसमा परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यदि यी परीक्षाहरू सफल भएमा तिनीहरूले अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा सरकार बाट अनुमोदनको लागि आवेदन दिन सक्षम हुनेछन्। कम्पनीले २०२० को अन्त्यसम्म १०० मिलियन खोप आपूर्ति गर्ने र २०२१ को अन्त्यसम्म १ अर्ब ३० करोड सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ।